How 11 Billionaires Made Their First Million - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Sidee 11 Bilyaneer u Sameeyeen Malaayiintii ugu Horreysay
Sidee 11 Bilyaneer u Sameeyeen Malaayiintii ugu Horreysay
Ma waxaad tahay ganacsade doonaya inuu kaalimaha ugu sarreeya ka galo dabaqyada bilyaneerka caanka ah ee adduunka? Ma jeceshahay inaad ku biirto circus -ka bilyaneerka ah? Markaa fiiro gaar ah u yeelo sidaan u iftiiminayno “Sida 11 -kan Bilyaneer ay u noqdeen malaayiintii ugu horreysay adduunka hal -abuurka.
Waxa kale oo laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato inaad ogaato in 65% 100-ka qof ee ugu taajirsan ay yihiin kuwo iskood u samaystay laakiin waxa habboon inay ahaato dantaadu maaha inta ay le'eg tahay iyo habsocodyada ay ku qaadatay ganacsatadan hodanka ah inay garaacaan malaayiinkoodii ugu horreeyay laakiin sida ay u sameeyeen.
Marka la eego arrintan, dib -u -eegidani waxay kugu dhiirri -gelin doontaa inaad noqoto bilyaneer adigoo ku dadaalaya inaad ka dhigto malaayiin -kaaga ugu horreeya oo tiir u ah inaad noqoto bilyaneer.
Kahor muujinta buuxda, fadlan ku dhufo badhanka rukunka si aad u qorto oo aad u hesho ogeysiisyo dheeri ah fiidiyahayaga xiga iyo talooyin ku saabsan noqoshada ganacsade guuleysta.
# 1. Jeff Bezos
Waxay ku qaadatay sedex sano aasaasihii iyo agaasimihii Amazon inuu ku guuleysto talaabadii 30 -meeyadii. Wuxuu noqday milyaneer iskiis u sameeyay 1997 markii uu ahaa 33 jir markii ganacsiga Amazon uu u keenay $ 54million. Markuu ahaa 35 jir, wuxuu gaadhay darajada bilyaneerka.
Maanta hantidiisa lagu qiyaasay waa $ 43.5billion. Sidee ayuu Jeff Bezos ku noqday taajirkan guulaystay? Si kastaba ha ahaatee, ma uusan kor u qaadin jagadan ilaa uu kala sooco inuu noqdo milkiilaha warbaahinta wuxuuna 1994 sameeyay shirkad internet ku salaysan oo ka iibisa buugaag, muusig, filimaan, alaab guri, elektiroonig, alaabta carruurtu ku ciyaarto, iyo alaabo kale oo badan dukaamada iyo macaamiisha labadaba garaashkiisa Seattle.
Maanta, meheraddaas ganacsi ee ku saleysan internetka ayaa ah tan ugu weyn niche -kan.
Bill Gates waa aasaasaha shirkadda Microsoft wuxuuna noqday milyaneer iskiis u sameeyay 1981. Waxay ku qaadatay lix sano inuu noqdo milyaneerkiisii ​​ugu horreeyay isagoo 22 jir ah. Maanta, Gates waa ninka ugu taajirsan adduunka. Gate, oo ka mid ah magacyadii hore oo caan ku ahaa waddada bilyaneerka adduunka ayay ahayd inuu gurguurto intuusan socon. Wadadiisii ​​guusha waxay ku bilaabatay sidii arday 13-sano jir ah oo tiknoolajiyad ka dhigta dugsiga harooyinka ee Seattle.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday soo -saare softiweer wuxuuna qorey softiweerkiisii ​​ugu horreeyay da'daas. Waayihiisii ​​Harvard, isaga iyo saaxiibkii magaaladiisa Paul G. Allen waxay u sameeyeen software kombiyuutarro yaryar oo la jaan qaadaya aasaaska, luqadda barnaamijyada caanka ah. Gates wuxuu ka baxay Harvard si uu u sameeyo Microsoft. Maanta, waa maal -yaqaan iyo sama -falle caan ah.
Isuduwaha Facebook iyo maamulaha ayaa noqday milyaneer 2004 markii uu ahaa 22 jir goobtiisa. Facebook hadda waa mashiinka warbaahinta bulshada ee ugu tiirsan oo la isku halleyn karo kaas oo in ka badan 2701 milyan oo isticmaale.
Goobta Mark, Facebook ayaa si toos ah u bilaabatay Juun 2004 laga bilaabo gurigiisa. Kahor dhammaadka sanadka, goobtu waxay gaartay hal milyan oo macaamiil ah. Facebook waxay leedahay in ka badan 375 milyan oo isticmaale waxayna u adeegtay mid ka mid ah shabakadaha ugu waaweyn ee shabakadda bulshada iyada oo ujeeddadeeda ugu weyn ay tahay isku soo dhoweynta adduunka.
Intaa waxaa dheer, ujeeddadan maskaxda ku jirta waxay u rogtay ganacsade intarneed iyo guru hal -abuur leh. Maanta, hal -abuurka hal -abuurka ah ayaa u keenay kaliya maahan milyankiisii ​​ugu horreeyay laakiin wuxuu ka dhigay bilyaneer leh hantida saafiga ah ee Maanta oo ah $ 43.9billion.
Spiegel wuxuu Snapchat la sameeyay saaxiibkiis ay isku fasalka yihiin Jaamacadda Stanford. Fasalka lixaad, wiilka yar ee tiknoolajigu wuxuu dhisay pc u gaar ah.
Sannadkii 2011, barnaamijkii lumay ayaa lagu bilaabay magaca Picaboo laakiin markii dambe waxaa loo beddelay Snapchat. Bartamihii-2013, Snapchat wuxuu lahaa ku dhawaad ​​60 milyan oo la soo degsado waxaana lagu qiimeeyay $ 800 milyan.
Isagoo 23 jir ah, aasaasaha iyo maamulaha Snapchat ayaa noqday milyaneer 2013. Ilaa maanta wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha tiknoolajiyadda ugu da'da yar uguna guulaha badan wuxuuna leeyahay qiyaas lagu qiyaasay $ 4billion.
#5. Sir Richard Branson
Branson waa bilyaneerka caanka ka ah Britain. Markii uu ahaa 16 jir, wuxuu ku dhiiraday ganacsigiisii ​​ugu horreeyay isagoo abuuray joornaal la yiraahdo Arday wuxuuna aasaasay meherad diiwaangelin ah. Sida muuqata, wuxuu furay silsilado dukaamada wax lagu qoro.
Branson wuxuu hantidiisa ku leeyahay shirkado ganacsi oo wata magaca astaanta bikradda 1972. Kooxda bikrada ah waxay maamushaa in ka badan 400 shirkadood oo ku yaal meelo kala duwan waxayna shaqaaleysiisaa ku dhawaad ​​70,000 oo qof 35 dal.
Branson wuxuu kasbaday milyankiisii ​​ugu horreeyay sanadkii 1973 isagoo 23 jir ah megastores bikrad ah. Hantidiisa maanta waa $ 5.1billion.
#6. Eeloon Miski
Musk waa aasaasaha PayPal iyo Tesla Motors iyo aasaasaha SpaceX. Musk wuxuu sheegay in mid ka mid ah furayaasha guushiisa ay tahay inuu qatar galo. Musk iyo walaalkiis Kimbal waxay aasaaseen Zip2 Corporation si ay u siiyaan hagaha magaalada iyo softiweerka tusaha wargeyska.
XIDHIIDHKA: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah Sida Loo Helo Bitcoins Bilaash 2022 | Gebi ahaanba Bilaash
Si kastaba ha ahaatee, ganacsadaha da’da yar isagoo 27 jir ah ayaa noqday milyaneer iskiis u sameeyay markii uu shirkadda ka iibiyey Compaq Computer Corporation lacag ka badan $ 300 milyan. Maanta, hantidiisa lagu qiyaasay waa $ 10.8billion.
Winfrey waxay ku soo biirtay dunida TV -ga iyadoo 19 jir ah. Markii ay jirtay 32 waxay noqotay maalqabeen warbaahineed iyo boqoradda telefishanka maalintii. Sannadkii 1995, qiimaheedii saafiga ahaa wuxuu gaadhay 340 milyan oo doollar, taasoo ka dhigtay haweenayda ugu taajirsan madadaalada.
Waxay noqotay milyaneer iskeed u samaysatay 1986 waxayna si la mid ah u noqotay bilyaneer haweeneyda madow ee ugu horreysa taariikhda iyadoo 49 jir ah sannadkii 2003. Maanta, maalqabeenka madadaalada ah wuxuu ku qiyaasay qiimaheeda saafiga ah inay ka sarreyso $ 3billion.
#8. George Lucas
Agaasimihii filimada ee aadka u fiicnaa wuxuu ku dhuftay adduunka ninka hodanka ah soo saarista filimada. Markii ugu horreysay ee uu agaasime ka noqdo wuxuu ahaa TH1971 -kii 1138 ee TH1973, laakiin filimkiisii ​​xigay ee 34 “Graffiti -ga Mareykanka ayaa faa'iido u keenay oo iskiis malaayiin u sameeyay. Markii uu jiray 1978, wuxuu noqday milyaneer iskiis u sameeyay XNUMX. Ka dib markii uu ku dhacay adduunka filimka, Lucas wuxuu noqday badeecad kulul.
Fikradiisa aadka u wanaagsan ee waxa uu ku tilmaamay "meel galbeed oo bannaan" ayaa ka dhigtay inuu abuuro filimka "Star Wars" kaas oo u keenay hanti aad u weyn oo u dhexaysa xafiiska sanduuqa, alaabta carruurtu ku ciyaarto, buugaag, iyo heshiisyo kale oo kala duwan oo ruqsad.
Soo saarista filimka “star wars” ayaa ka caawisay inuu ka boodo milyaneer ilaa bilyaneerka isagoo 52 jir ah. Maanta, qiyaasta saafiga ah ee saafiga ah waa $ 4.5billion.
#9. Warren Buffett
Buffett wuxuu bilaabay safarkiisii ​​maalgashiga marxaladdii hore ee noloshiisa laga soo bilaabo cunsuriyaddii carruurnimada iyo iibsashada saamiyada si uu wax ugu barto gurus maalgashi.
Markay da'diisu ahayd 11, Buffett wuxuu bilaabay maalgelin maalmeed isagoo samaystay iibsigiisii ​​ugu horreeyay. Wuxuu ku hormarey isagoo sameeyay Buffet Associates 1956. 10 sano kadib, wuxuu la wareegay Berkshire Hathaway.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Meherad New Jersey 2022: Tusaha Tallaabada-Ugu-dambaysa ee Ugu Dambeeya
Maanta, waa halyeey maalgashi wuxuuna sameeyay malaayiindiisii ​​ugu horreysay maalgashi shirkad soo saarista dabaysha. Wuxuu noqday maalqabeen bilyaneer ah isagoo 56 jir ah wuxuuna hadda yahay ninka saddexaad ee ugu taajirsan adduunka oo lagu qiyaasay lacag dhan $ 60.1billion.
#10. Jack Cowin
Jack wuxuu noqday ganacsade aan caadi ahayn oo leh maalgashi muddo dheer ah oo ku saabsan cuntada degdegga ah ee la xannibay. Wuxuu ku sameeyay milyankiisii ​​ugu horreeyay digaag la shiilay Kentucky Fried Chicken ka hor inta uusan u gudbin iibinta burgerka oo uu ugu yeero jaakada Hungry.
Maanta, Cowin waa mulkiilaha Competitive Foods Australia, oo ka mid ah soosaarayaasha cuntada ee ugu waaweyn dalka. Macaamilkiisa ganacsi -abuurka cuntada ayaa nasiib u yeeshay suuqyada waaweyn ee makhaayadaha ee dalka, laga bilaabo KFC, Burger King, iyo Pizza Domino. Maanta, qiimaha Cowin waa $ 1.6billion.
#11. Aliko Dangote
Dangote waa qofka Afrika ugu taajirsan waana aasaasaha shamiitada Dangote. Meheraddiisii ​​waxay bilaabatay 1977 wuxuuna ku kasbaday hanti isagoo soo dejiyay oo iibiyay badeecadaha beeraha markii dambena shidaal iyo gaas.
Isagoo 21 jir ah ayuu adeerkii ka amaahiyay $ 3,000 oo ganacsi. Ganacsigiisu wuxuu ka koray iibinta badeecadaha beeraha, alaabta guriga iyo alaabta dhismaha. Maanta, kooxda Dangote waxay saadaalisay soo saaridda sibidhka, sonkorta, cusbada, afar, alaabta saliidda iyo gaaska iwm.
Ugu dambayntii, dib -u -eegidani waxay kugu dhiirri -gelinaysaa inaad ku biirto circus -ka bilyaneerka laakiin waxaa muhiim ah inaad barato inaad 'Bilawdo yar' oo aad ballaariso masraxa aad rabto.
Si aad u noqoto bilyaneer, waa ku habboon tahay inaad u hoggaansanto qodobbadan guusha laga jaray oo laga soo saaray qodobbada guusha badan ee bilyaneeradan. Dhammaan sifooyinka kala duwan ee la jaray iyo hababka ganacsiga, shan (5) mabaadi'da la midka ah ama caadooyinka guusha ayaa laga dhex helay bilyaneeradan.
Mabaadiidaani ma aha kuwo laga dhaxlo ama u gaar ah bilyaneerada aan kor ku soo sheegnay laakiin waa mid cid waliba qaadan karto oo loo adeegsan karo in lagu gaaro guul iyo hanti baaxad leh.
Nuqul ka samee Liisaska Kharashyada Billaha ah oo hubso inaad wax badan keydsato
100+ Istiikaro Bilaash ah oo aad ka codsan karto Shirkadaha
10 -ka Waddan ee ugu Musuqmaasuqa badan Adduunka 2022 -ka
Qeexitaanka Lacag Celinta Caymiska Farqiga: Sida ay u shaqayso 2022
Sida Loo Bilaabo Meheradda E-commerce Sannadka 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-Tallaabo
Ganacsiga e-ganacsiga ayaa sii kordhaya oo beddelaya sheekada. Hadda waxaad noqon kartaa madax adiga kuu gaar ah mana...
15 Kooxaha Isku Xirka Ganacsi ee Ugu Fiican Inay Noqdaan 2022
Isku xirka ganacsiga macneheedu waa in la sameeyo xiriir wadaag ah oo lala yeesho ganacsatada kale. Faa'iidooyinkeeda ayaa u badan guulaha aan la taaban karin ee la sameeyay…
Ganacsigu waa safar adag. Maalmo badan, waxaad hubaal ahaan lahayd inaad adigu shaqo badan qabto oo aad wax yar samayn doonto ama maya…
Sida Ganacsi looga Bilaabayo Minnesota sannadka 2022-ka: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Minnesota waxay ku jirtaa kaalinta 5-aad ee kobaca ugu dhaqsaha badan ee Maraykanka. Sidaa darteed, ganacsi laga bilaabo Minnesota…
Daqiiqad 49 akhri
200 Fikradaha Ganacsi ee ugu sarreeya Hindiya | 2022 Liiska Buuxa
Hindiya waa mid ka mid ah wadamada Aasiya ee dhaqaalahoodu xawliga ku socdo oo leh karti iyo dhalinyaro. baxay…